Thai | myanmarmovies.com
( အချစ်မိုးတွေရွာပေးပါ )
မြန်မာစာတန်းထိုး HD နော်
အပိုင်း..၁ မှ ၁၄ ပိုင်းအထိ..အစ..ဆုံး💘💘
ဒီလိုဖြစ်နေတာပါ ဒါတင်မကပါဘူး Nokရဲ့ဖခင်ကလည်းငယ်ရွယ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီး မိခင်ကလည်းနောက်အိမ်ထောင်ပြုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေကြောင့်Nokဟာ အချစ်ကိုအယုံကြည်မရှိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
Nai(P’James Ji)ကတော့သူ့မိသားစုအရှုပ်အရှင်းတွေကြောင့် Nokတို့အိမ်မှာလာနေခဲ့ပါတယ် (ဘာပြဿနာမှန်းတော့မပြောထားပါဘူး)
Nok ကို Naiနဲ့လက်ထပ်ဖို့အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးတဲ့အခါ….(Naiကတော့ Nokကိုချစ်နေခဲ့ပြီလေ)
လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Naiကိုကွာရှင်းဖို့ပဲ Nokတစ်ယောက်ကြံစည်မိနေခဲ့ပါတယ်
မထင်မှတ်ပဲကိုယ်ဝန်ရလာတဲ့အခါ Nokတစ်ယောက် Gameတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာက ကလေးမွေးပြီးရင်ကွာရှင်းဖို့
ခေါင်းမာတဲ့Nokတစ်ယောက် Naiရဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေအောင်ကျရှုံးမလား ဆက်ပဲခေါင်းမာပြီးကွာရှင်းမလားဆိုတာ…..
အချစ်မိုးတွေရွာပေးပါ ep-4-1 like and sharetaew and jame ji
Posted by လရောင် ဖြူဖြူ on Wednesday, September 19, 2018
အချစ်မိုးတွေရွာပေးပါ ep-4-2 like and sharetaew and jame ji
Ep 13-9 _13ပိုင်းထိ
Ep 14-2 ဇာတ်သိမ်းပိုင်း
ကျောက်ဖစ်သွားသောနှလုံးသား heart of stone အပိုင်း ၁မှ ၂၇ထိ စ/ဆုံးရပြီးနော်😘
#Admin – kမှ Link စုစည်းသည်…
အပိုင်း (13) မြန်မာစာတန်းထိုး
အပိုင်း( 14) မြန်မာစာတန်းထိုး
အပိုင်း (17 )မြန်မာစာတန်းထိုး
အပိုင်း (19) စာတန်းမထိုး
အပိုင်း (20) စာတန်းမထိုး
အပိုင်း (21) စာတန်းမထိုး
အပိုင်း (22) စာတန်းမထိုး
အပိုင်း (23) စာတန်းမထိုး
အပိုင်း (24) စာတန်းမထိုး
အပိုင်း (25) စာတန်းမထိုး
အပိုင်း 27ဇောတ်သိမ်းပိုင်း စာတန်းမထိုး
& Eng Sub အစအဆုံး
Crd : Video Owner💛
မြန်မာစာတန်းထိုး စ/ဆုံး 😍😘
ဘယ်အချိန်ပဲပြန်ကျိကျိ ရိုးမသွားပါဘူး ဒီကားမှာ
Posted by ထိုင်းဇာတ်လမ်းများ on Thursday, March 22, 2018
Posted by ထိုင်းဇာတ်လမ်းများ on Saturday, March 24, 2018
Posted by ထိုင်းဇာတ်လမ်းများ on Monday, March 26, 2018
Posted by ထိုင်းဇာတ်လမ်းများ on Tuesday, March 27, 2018
Posted by ထိုင်းဇာတ်လမ်းများ on Wednesday, March 28, 2018
Posted by ထိုင်းဇာတ်လမ်းများ on Thursday, March 29, 2018
Posted by ထိုင်းဇာတ်လမ်းများ on Friday, March 30, 2018
Posted by Aye Chan May on Thursday, August 9, 2018
အပိုင်း ၂၄ (ဇောတ်သိမ်းပိုင်း)
The Fallen Leaf (2019) Thai Series
"The Fallen Leaf"(​လေလွင့်​​ရွက်ေ​ကြွ)Ep-7 (MM sub)Crd:channelmyanmar
Posted by VIRGO on Thursday, July 4, 2019
” လေလွင့်ရွက်ကြွေ ”
နီရာဆိုတာ လှပတဲ့ပန်းလေးတွေနားမှာ အမြဲရှိပြီး ပန်းမဖြစ်လာနိုင်တဲ့ သစ်ရွက်ငယ်လေးတရွက်လိုပါပဲ…
ဒီဇာတ်လမ်းလေးက သူ့ကိုအရမ်းချစ်တဲ့အမေကလွဲလို့ ဘယ်သူကမှ လက်မခံတဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ မိန်းမငယ်လေးအဖြစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ ကောင်လေး တစ်ယောက်အကြောင်းပါ ။
သူ့အဖေက သူ့အပေါ်မကောင်းတဲ့အပြင် အမေ့အပေါ်လည်းနှိပ်စက်တယ်
နီရာက သူ့အဖေကို သူ့ဦးလေးချတ်ချဝီလိုဖြစ်စေချင်ခဲ့တယ်
သူ့အမေအပြင် သူ့အပေါ် ကြင်နာ ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ ယောက်ျားပေါ့…
တားမြစ်ထားတဲ့အချစ်တခုပေါက်ဖွားလာတာကို ချတ်ချဝီ သတိထားမိပြီး သူ့တူလေးနီရာကို ငြင်းဆန်ခဲ့တယ်
နီရာ စိတ်ထိခိုက် အသည်းကွဲပြီး သူ့အမေအကူအညီကို ယူကာ သူ့ဘဝတခုလုံးပြောင်းလဲသွားမယ့် အရာတခုကို လုပ်ခဲ့ပါတယ်
နီရာက လန်ဒန်မှာ အရမ်းလှပတဲ့အမျိုးသမီးတဦးအဖြစ်ပြောင်းပေးနိုင်မယ့် ခွဲစိတ်မှုကိုလုပ်ခဲ့ပြီး ကံမကောင်းစွာနဲ့ နီရာဆေးရုံကမဆင်းရသေးခင် သူ့အမေဆုံးပါးခဲ့ရတယ် ။
သူ့အမေကို သေစေခဲ့သူနဲ့ အရင်က သူတို့ သားအမိ ခံစားခဲ့ရတာတွေကို ပြန်လက်စားချေဖို့ လူအသစ်တယောက်အနေနဲ့ ထိုင်းကိုပြန်လာခဲ့ပြီး ရင်းနှီးတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ညီမအမည်ခံနေခဲ့တဲ့ သူမ နီရာ…
တနေ့မှာ နီရာက မတော်တဆ ချတ်ချဝီ နဲ့တွေ့ခဲ့ပြီး သူမအလှမှာ ချတ်ချဝီရော သူ့အဖေပါ နစ်မြောသွားခဲ့တယ် (အရင်က သူတို့တူ/သားမှန်းမသိပဲပေါ့….)
နီရာ့ကို အမြဲမနာလိုဖြစ်နေတဲ့ သူ့အဒေါ်က နီရာ့ဘဝအမှန်ကို သိသွားပြီး နေရာတကာလိုက်ပိတ်ပင်ချိန်မှာတော့ နဂိုကတည်းက တားမြစ်ထားတဲ့ ကံဆိုးလှတဲ့ ချတ်ချဝီနဲ့ နီရာတို့ အချစ်လမ်းက ပိုပို ရှုပ်ထွေးလာခဲ့တယ် ၊
နီရာ Transwoman အဖြစ်မပြောင်းခင်နေရာမှာ Love by chanceထဲက Saint က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်❤
Aired: Jun 11, 2019
နီရာ အဖြစ် Baifern Pimchanok Luevisadpaibul
ချတ်ချဝီ အဖြစ် Push Puttichai Kasetsin
ချုမ်ထဝတ် အဖြစ် Sam Yuranunt Pamornmontri
လန်ရောင်အဖြစ် Nida Patcharaveerapong
ဒေါက်တာ ဘန်ဂျန် အဖြစ် Aun Witaya Wasukraipaisarn
(အညွှန်းရေးသားပြီး ဘာသာပြန်ပေးထားကြတာကတော့ Kyi Nue Zin နဲ့ Nang Mwe Kham ဖြစ်ပါတယ်)
Translated by Kyi Nue Zin and Nang Mwe Kham
Encoded Naing Aung Latt
(khun chai puttipat)
“Love Destiny” … ချစ်ဖူးစာ[ မြန်မာစာတန်းထိုး ] (စ/ဆုံး)
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ အအောင်မြင်ဆုံးနှင့်
Kadesurang လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ထားကောင်းတဲ့ ၂၁ရာစုမိန်းကလေးတယောက်က တနေ့မှာ လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ပဲ သူ့အရင်ဘဝက ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ရောက်သွားတယ် အတိတ်ဘဝမှာ သူက အရမ်းမုန်းစရာကောင်းပြီး တကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်။ သူနဲ့စေ့စပ်ထားတဲ့ သူ သဘောကျနေတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့အစေခံကို တနေ့မှာ သတ်လိုက်မိတယ်။
မင်းသားအဖေနဲ့ မင်းသားက karaked ကိုအပြစ်ပေးဖို့ ကျိန်စာတခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီကျိန်စာကြောင့် karakedသေဆုံးသွားခဲ့လို့ kaedsurang ရဲ့ဝိညာဉ်အစားထိုးဝင်ရောက်လာတော့ သူအတိတ်ဘဝက ဘယ်လောက်ဆိုးခဲ့တယ်ဆိုတာ သိလာတယ် ဒါနဲ့ kaedsurang က သူ့အရင်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြန်ရောက်ပါစေဆိုပြီး ကောင်းတာတွေအများကြီးလုပ်ဆောင်ပါသတဲ့။ သူ့ဘေးနားကလူတွေကလည်း သူက တခြားသူတယောက်ဖြစ်သွားသလို ပြောင်းလဲသွားလို့ ပြောဆိုကြရင်း ဒီဘက်ခေတ်မှာဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနော်…
ချစ်ဖူးစာ (2018) T Drama စ/ဆုံး (မြန်မာစာတန်းထိုး) Crd
ဒီကားလေကတော့ 2018 ထဲမှာအအောင်မြင်ဆုံးနဲ့
လူကြိုက်အများဆုံး T Drama
ချစ်ဖူးစာအပိုင်း ၂ မြန်မာစာတန်းထိုး
Posted by AyeChan Phyo on Saturday, April 7, 2018
ချစ်ဖူးစာ( ၃ ).၆နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်(တောင်ပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ)
Posted by Sai Nay Myanmar on Friday, March 30, 2018
အပိုင်း ၄.၄ IThar Nge
Posted by Chit Phoo Sar on Monday, April 9, 2018
အပိုင်း ၄.၆ Thar Nge
Posted by Chit Phoo Sar on Tuesday, April 10, 2018
၄. ၇Thar Nge
Posted by Chit Phoo Sar on Wednesday, April 11, 2018
၄.၈ Thar Nge
Posted by Chit Phoo Sar on Thursday, April 12, 2018
ချစ်ဖူးစာ-အပိုင်း(၄.၉)သင်္ကြန်တွင်းတရားစခန်းဝင်နေပါသဖြင့် ခုမှတင်ပေးလိုက်ရတော့တယ် ;)မျှော်နေတဲ့သူတွေအားလည်းနာတယ် ခင်လည်းခင်တယ်။ကြည့်ပြီးတဲ့သူရောပြန်စကြည့်မယ့်သူပါ အားလုံးကြည့်တော်မူပါဘုရား…
Posted by Chit Phoo Sar on Tuesday, April 24, 2018
အပိုင်း ၅.၁Thar Nge
ချစ်ဖူးစာ-အပိုင်း(၅.၁)ကဲကဲ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ပဲကြည့်ပြီးအနားယူကြပါ သခင်လေးတို့သခင်မလေးတို့ဘုရား။အိုခေ ခ(Fan D Narrr) ဖန်ဒီနား – အိမ်မက်လှလှမက်ပါစေ (ထိုင်းလိုတစ်နေ့နဲနဲမှတ်သွားနော်)ကြည့်ရင်း ထိုင်းစကားတွေလည်း တစ်လုံးစနှစ်လုံးစလေ့လာရင်းထိုင်းဇာတ်ကားအသစ်အတွက်လည်း နားရည်ဝတာပေါ့ဘုရာ့။
အပိုင်း ၅.၂ Thar Nge
Posted by Chit Phoo Sar on Thursday, April 26, 2018
အပိုင်း ၅.၃Thar Nge
ချစ်ဖူးစာ-အပိုင်း(၅.၃)ဒီအပိုင်းကိုကြည့်ပြီးရင် ဖန်ဒီနား (Fhan D Narr) အိပ်မက်လှလှမက်ပါစေ…
Posted by Chit Phoo Sar on Friday, April 27, 2018
ကောင်းသောနံနက်ခင်းပါဘုရားချစ်ဖူးစာ-အပိုင်း(၅.၄) ကိုလည်း ကြည့်ရှုတော်မူပါဦးလားဘုရားFIV Entertrainment Channel မှတင်ဆက်သည်။
ချစ်ဖူးစာ-အပိုင်း(၅.၅)ကြည့်ရှူအားပေးတော်မူပါဘုရားFIV Entertrainment Channel FIV TV Network တို့မှတင်ဆက်သည်။
Posted by Chit Phoo Sar on Saturday, April 28, 2018
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းလေးပါသာယာတဲ့မနက်ခင်းလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေချစ်ဖူးစာ-အပိုင်း(၅.၆) ကိုလည်းထပ်မံကြည့်ရှူအားပေးတော်မူပါဦးလား ဘုရား…FIV Entertrainment Channel FIV TV Network FIV Music တို့မှတင်ဆက်သည်။
ချစ်ဖူးစာ-အပိုင်း(၅.၇) ပါဘုရား******************************အကြာကြီးပေးမျှော်တော်မူမိတဲ့အတွက် ခွင့်လွတ်ပေးတော်မူပါဘုရား…ကြည့်ပြီးပြီးဖြစ်လည်းပြန်လည် အလွမ်းပြေလေးကြည့်နိုင်သေးရင်ဆက်ကြည့်ပါဦးလားဘုရား…ဘာသာပြန်မကောင်းလို့မကြည့်တော့တာလားဘုရား…စိမ်းကားနေကြပြီးလား သခင်ကြီးတို့ သခင်မကြီးတို့ဘုရား…အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ နီးစပ်အောင်တော့ကြိုးစားပြန်ထားပေးပါတယ်ဘုရား။သတိရတော်မူပါတယ်ဘုရား…အိုးခေ ကျောက်ခ(ထိုင်း) – (မြန်မာ)ခစ်ထွန်နား – သတိရတယ်နော်
Posted by Chit Phoo Sar on Saturday, May 26, 2018
ချစ်ဖူးစာ-အပိုင်း(၅.၈) ပါဘုရား******************************ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း အားပေးတော်မူပါဦးလားဘုရားကျန်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေဘုရား…(ထိုင်း) – (မြန်မာ)ချွိုင့်နွယ်နား – နဲနဲလောက်ကူညီပါနော်ကောင်းသောညဖြစ်ပါစေဘုရား…
အပိုင်း ၅.၉Thar Nge
အပိုင်း ၆.၁Thar Nge
အပိုင်း ၆.၂Thar Nge
အပိုင်း ၆.၃Thar Nge
အပိုင်း ၇.၁Thar Nge
အပိုင်း ၇.၂Thar Nge
အပိုင်း ၇.၃Thar Nge
အပိုင်း ၈.၁Thar Nge
အပိုင်း ၈.၂Thar Nge
အပိုင်း ၈.၃Thar Nge
အပိုင်း ၉.၁Thar Nge
အပိုင်း ၉.၂Thar Nge
အပိုင်း ၉.၃Thar Nge
အပိုင်း ၉.၄Thar Nge
အပိုင်း ၁၀.၁Thar Nge
အပိုင်း ၁၀.၂Thar Nge
အပိုင်း ၁၀.၃Thar Nge
အပိုင်း ၁၁.၁Thar Nge
အပိုင်း ၁၁.၂Thar Nge
အပိုင်း ၁၁.၃Thar Nge
အပိုင်း ၁၁.၄Thar Nge
အပိုင်း ၁၂.၁Thar Nge
အပိုင်း ၁၂.၂Thar Nge
အပိုင်း ၁၂(၃)Thar Nge
အပိုင်း ၁၃.၁Thar Nge
အပိုင်း ၁၃.၂Thar Nge
အပိုင်း ၁၃.၃Thar Nge
အပိုင်း ၁၄.၁Thar Nge
အပိုင်း ၁၄.၂Thar Nge
အပိုင်း ၁၄.၃Thar Nge
အပိုင်း ၁၅.၁Thar Nge
အပိုင်း ၁၅.၂Thar Nge
အပိုင်း ၁၅.၃Thar Nge
အပိုင်း ၁၅.၄Thar Nge
အပိုင်း ၁၅.၅Thar Nge
Copyright &copy2019 myanmarmovies.com, by YMTW